I-190 euros kwaye ukhululekile ukuhamba: Isikhululo senqwelomoya saseVienna sikunika uvavanyo lwendawo ye-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » I-190 euros kwaye ukhululekile ukuhamba: Isikhululo senqwelomoya saseVienna sikunika uvavanyo lwendawo ye-COVID-19
Airlines • isikhululo • Iindaba zaseOstriya eziziiNdaba • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ngamana 3, 2020
I-190 euros kwaye ukhululekile ukuya kuyo: Isikhululo senqwelomoya saseVienna sikunika uvavanyo lwendawo ye-COVID-19
Isikhululo senqwelomoya saseVienna izakube inikezela ngesiza intsholongwane ye-Corona vavanyo kubo bonke abakhweli abafika eFlughafen Wien.
Amagosa ezempilo aseAustria afuna ukuba wonke umntu ofika elizweni ngenqwelo moya ukuba abonelele ngesatifikethi sezempilo esiqinisekisa ukuba abayiphathi intsholongwane ye-COVID-19. Ngaphandle kokuba kukhutshwe kungekho ngaphantsi kweentsuku ezine ngaphambi kokufika, abahambi kufuneka babhalisele iiveki ezimbini zokuzimela bodwa.
Ukuqala ngoMvulo, kuyakubakho enye indlela eya kwenza ukuba abakhweli baphephe ukuvalelwa bodwa ngeentsuku ezili-14- uvavanyo olucacisa indawo ekuyo ngokulinda iiyure ezintathu ngaphambi kokuba iziphumo zifike.
Olu vavanyo lufanayo lwePCR luya kufumaneka kubantu abaphuma e-Austria abanokufuna isatifikethi sokuya kwelinye ilizwe abaneemfuno ezifanayo zokungena okanye abanye abantu abanqwenela ukuvavanywa, utshilo isikhululo sendiza ngeCawa. Inkonzo ixabisa i- € 190 (malunga ne- $ 210).
I-Austria okwangoku ikwinkqubo yokukhulula ukuvalwa kwayo kwe-COVID-19 kuzwelonke, ngamanye amashishini angabalulekanga avunyelwe ukuvula emva kweeveki ezisixhenxe zokuvalwa. Ilizwe labika phantse i-15,600 yosulelo kwaye phantse i-600 yabhubha inxulunyaniswa nalo bhubhane.